Dlala njenge 'Evil Dead's' Ash Williams kwi 'Skyrim' - iHorror
Ikhaya	imidlalo yokuzonwabisa	Dlala njenge 'Evil Dead's' Ash Williams kwi 'Skyrim'
Dlala njenge 'Evil Dead's' Ash Williams kwi 'Skyrim'
by UTrey Hilburn III Julayi 20, 2021
by UTrey Hilburn III Julayi 20, 2021 1,122 imbono
Ngokuqinisekileyo sonke sidlalile Skyrim kwifomathi nganye nganye kunye neqonga elaziwayo eluntwini ngoku. UTodd Howard kunye noBethesda baqinisekile ukuba iSkyrim iya kuthi ekugqibeleni ibaleke kuyo yonke into kubandakanya Pong ukuba unikwe ixesha elaneleyo. Andikhalazi ngumdlalo omnandi. Ngapha koko, iimods ziyonwabisa. Imodyuli epholileyo eboniswe yiGamer yePC, yeyokuba ubona ukuba uthathe inxaxheba Ababi Abafileyo U-Ash Williams ngokulandelayo… kwaye nangamawaka Skyrim dlala ngoku.
Imodyuli ikubona uthatha indima ye-Ash epheleleyo kunye ne-chainsaw kunye nelizwi. Ewe kunjalo, uza epakishe zonke ii-liners zakhe ezilungileyo, oko kuya kuqinisekisa ukuba uyakucela Skyrim ukukunika iswekile ekupheleni kobusuku.
Ukuze udlale njengeAsh kuya kufuneka ufake ifayile Ukungcola kufile mod kwaye uhambe apho. Kufanelekile ngokupheleleyo ukuba kufakwe enye Skyrim kwaye ixesha elingakuthatha ukuba usebenzise le mod.
Ke uthini wena, Screwhead? Ngaba uza kuyithatha Skyrim uziphose njengomsindisi wethu othandekayo uAsh Williams? Sazise kwicandelo lamagqabaza.
Umlawuli wesoyiki yesitalato unezicwangciso ezinkulu zendlela yokwandisa indalo. Funda ngakumbi apha.